Apple Mepu ichawedzera kugadzirisazve kumamepu eSpain nePortugal | Ndinobva mac
Apple Mepu ichawedzera kugadzirisazve kumamepu eSpain nePortugal
Hatina kana shanduko kana shanduko mu mepu kunyorera muSpain nePortugal, nguva ino zvinoita sekunge chijana chedu. Iyo Cupertino firm yaizoedza mamamepu ekushandisa ichiwedzera kugadzirisazve yakazara kuMamepu.
Nhau idzo dzakaburitswa nenhau dzakasiyana siyana kusanganisira MacRumors inoratidza kuti iyo Cupertino yakasimba iri kuyedza iyi nyowani Apple Mepu dhizaini muSpain nePortugal. Uye zvinoita sekunge Apple inoramba ichivandudza mamepu uye ichishanda nesimba kuti chishandiso ichi ndicho chinoshandiswa nevashandisi vekambani, ichisiya Google Mepu padivi.
Zvine musoro nyika dzekutanga kugashira dhizaini idzi dzave United States, Ireland, United Kingdom neCanadaGare gare zvinoita sekunge Apple inotarisa kuSpain nePortugal kuwedzera uku kuwedzera muapp yeMepu.
Zviri pachena kuti vashandisi vazhinji vachiri kuda Google Mepu kufamba nemamepu kana kugamuchira madhairekisheni paunenge uchityaira, uchifamba kana zvakafanana, asi ichokwadi zvakare kuti Apple Mepu inoramba ichivandudza uye vazhinji uye vazhinji vanoishandisa vachishandisa.
Kunatsiridzwa kweruzivo uye ruzivo rwezvivakwa, kuvandudzwa kweiyo topographic chimiro cheapp, maonero akavandudzwa nemaonero akareruka achiwedzera kuwanda kwemashoko pamusoro pemukati enzvimbo senge mapaki kana zvivakwa uye zvimwe zvakawanda. Izvi zvinoratidza kuti mashandisiro ari kuramba achivandudza uye kuti isu tinogona kuenderera nekugamuchira mamwe mashoko nezvekuvandudzwa kweApple Mapp app. Zvakakosha kutaura izvozvo idzi nhau dzichiri kudzimwa nhasi ivo vari kungoitisa bvunzo saka ichave nguva yekuenderera mberi nekumirira neshanduro dzazvino dzeMepu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Apple Mepu ichawedzera kugadzirisazve kumamepu eSpain nePortugal
Mhoro nhasi Chivabvu 1 mumamepu angu emaapuro eSpain, ini ndatowana dhizaini nyowani
Iwe unogona ikozvino kutenga Mac mini M1 neiyo 10 GB Ethernet sarudzo
Kwete, Apple haina kuronga kushandura iyo iPad kuita Mac